Ukuzalisa i-ajenda yam ye-Baltimore-Geofumed
Ikhaya/Iiphotography/Ukuzalisa i-ajenda yam eBaltimore
Ukukhangela, ukukhangela ukuba wenze ntoni eBaltimore ngenxa yokuba ndiza kuya kwinkomfa ye Bentley Systems, ndifumene umboniso weemephu zakudala ezixhaswa nguNavteq kwaye igama lakhe linomdla: “Ukufumana indawo yethu emhlabeni“. Lo mboniso wenziwa eBaltimore ukusuka ngoMatshi ukuya kuJuni walo nyaka kunye neekhilomitha ukusuka kwi-Inner Harbor.
Oku kuthathwa njengowona mboniso wemephu waseMntla Melika unebhongo. Baqinisekisa ukuba abatyeleli baya kukwazi ukubona ubuso ngobuso obona butyebi bukhulu kakhulu bempahla, kwaye hayi iimephu ezenziwe ngabazobi beemephu kuphela kodwa kunye neemephu ezibonisa amandla eendawo ezahlukeneyo zehlabathi. Lo mboniso uquka iimephu ezinqabileyo, ezichukumisayo ngokweenkcukacha, imibhalo-ngqangi eyenziwe ngabahloli bamazwe, imimandla, iimephu zemimandla eyahlukeneyo yehlabathi kuquka amacwecwe abhalwe ngoonobumba abatsobhileyo asuka eMesopotamiya. Ngoko ke ndiza kuchitha i-12 yeedola eziyixabisayo kwaye ndizame ukubona ukuba ukhenketho olukhokelwa yiselfowuni lusebenza njani.
Apha ndikubonisa imephu yeAztec Capital, Tenochtitlán. Yenziwe nguHernán Cortés ngo-1524… wow, ndicinga ukuba ndizokonwaba.
Ndiyayibulela ikhonkco eliya kwigumbi leMaphu
Enkosi Alberto, ndiza kuhlala ndiyikhumbula loo nto.
Ukuba unomdla koololiwe, ndwendwela imyuziyam kaloliwe eBaltimore equlathe "indlu ejikelezileyo" emangalisayo enesitokhwe esiqengqelekayo kunye neelocomotives kumashumi eminyaka yokuqala yenkulungwane ye-40. Kwaye ukuba ungafika uVase. I-DC, (imizuzu engama-XNUMX ngemoto kunye nenkonzo kaloliwe entle kakhulu), qiniseka ukuba undwendwela "iCandelo leMaphu" yeThala leeNcwadi leCongress, apho unokuzonwabisa ngengqokelela eyoyikekayo yeemephu zaseSpain zaseMzantsi Melika.